Jaona 5 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
5 Nisy fetin’ny+ Jiosy taorian’izany, ka niakatra tany Jerosalema i Jesosy. 2 Ary any Jerosalema, eo akaikin’ny vavahadin’ondry,+ dia misy dobo atao amin’ny teny hebreo hoe Betesda, izay misy lala-mitafo* dimy. 3 Tao no nandrian’olona maro be, dia ny marary, ny jamba, ny malemy tongotra, ary ny kilemaina. 4 * —— 5 Ary nisy lehilahy efa narary nandritra ny valo amby telopolo taona koa tao. 6 Nahita azy nandry teo i Jesosy, ary nahalala fa efa ela no naharariany,+ ka hoy izy taminy: “Te ho sitrana ve ianao?”+ 7 Dia namaly ilay marary hoe: “Tsy mba misy olona mametraka ahy ao anaty dobo, tompoko, rehefa mihetsika ny rano. Fa raha vao manatona aho, dia misy olona misosoka midina eo alohako.” 8 Hoy i Jesosy: “Mitsangàna, batao ny fandriananao ka mandehana.”+ 9 Dia sitrana avy hatrany ilay lehilahy, ary nobatainy ny fandriana keliny ka nandeha izy. Sabata+ ny andro tamin’izay. 10 Koa hoy ny Jiosy tamin’ilay lehilahy sitrana: “Sabata ny andro, ka tsy azo atao+ izao mitondra fandriana izao.” 11 Hoy anefa ny navaliny azy ireo: “Ka ilay nanasitrana ahy mihitsy ange no nilaza tamiko hoe: ‘Batao ny fandriananao ka mandehana’ e!” 12 Dia nanontany ireo hoe: “Iza izany olona nilaza taminao izany hoe: ‘Batao ny fandriananao ka mandehana’?” 13 Tsy nahalala an’i Jesosy anefa ilay lehilahy sitrana, satria efa niala teo i Jesosy, sady vahoaka be no tao amin’ilay toerana. 14 Nahita azy tao amin’ny tempoly i Jesosy taorian’izany, ka nanao taminy hoe: “Efa sitrana ianao izao, ka aza manota intsony sao hisy zavatra ratsy noho ny teo hahazo anao.” 15 Lasa ilay lehilahy ka nilaza tamin’ny Jiosy fa i Jesosy no nanasitrana azy. 16 Dia nanenjika+ an’i Jesosy ny Jiosy noho izy nanao ireo zavatra ireo tamin’ny Sabata. 17 Hoy anefa izy: “Ny Raiko tsy mitsahatra miasa mandraka ankehitriny, ary izaho koa tsy mitsahatra miasa.”+ 18 Koa vao mainka nitady hamono azy ny Jiosy,+ satria nihevitra izy ireo fa nandika ny Sabata izy sady niantso an’Andriamanitra hoe Rainy,+ ka nanao ny tenany ho mitovy+ amin’Andriamanitra. 19 Ary hoy koa ny navalin’i Jesosy: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny Zanaka tsy manao na inona na inona araka ny nahim-pony, fa izay hitany ataon’ny Ray ihany no ataony.+ Fa izay rehetra ataon’ny Ray dia izany koa no ataon’ny Zanaka, sady ataony toy ny anaovan’ny Ray azy. 20 Ny Ray tia ny Zanaka+ ary mampiseho aminy ny zava-drehetra ataon’ny tenany, ary mbola hampiseho aminy asa lehibe noho ireo izy, mba hahagaga anareo.+ 21 Fa toy ny ananganan’ny Ray ny maty ka amelomany azy indray,+ dia toy izany koa no ameloman’ny Zanaka an’izay tiany hovelomina.+ 22 Tsy mitsara na iza na iza ny Ray, fa nankininy tamin’ny Zanaka ny fitsarana rehetra,+ 23 mba hanomezan’ny rehetra voninahitra ny Zanaka,+ toy ny anomezan’izy ireo voninahitra ny Ray. Izay tsy manome voninahitra ny Zanaka dia tsy manome voninahitra ny Ray izay naniraka azy koa.+ 24 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay mandre ny teniko ka mino an’ilay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay,+ ary tsy melohina izy fa efa niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana.+ 25 “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ho avy ny fotoana, eny, tonga ankehitriny ny fotoana handrenesan’ny maty+ ny feon’ny+ Zanak’Andriamanitra, ary ho velona izay nihaino.+ 26 Fa toy ny ananan’ny Ray fiainana ao aminy+ no anomezany alalana ny Zanaka mba hanana fiainana ao aminy.+ 27 Ary nomeny fahefana hitsara izy,+ satria Zanak’olona.+ 28 Aza gaga amin’izany fa ho avy ny fotoana handrenesan’izay rehetra any am-pasana*+ ny feony, 29 dia hivoaka izy ireo. Koa izay nanao ny tsara dia hatsangana ho amin’ny fiainana,+ fa izay zatra nanao ratsy kosa hatsangana ho amin’ny fanamelohana.+ 30 Tsy manao na inona na inona araka ny nahim-poko aho, fa araka izay reko no itsarako, ary marina ny fitsarako,+ satria tsy ny sitrapoko no tiako hatao, fa ny sitrapon’ilay+ naniraka ahy. 31 “Raha izaho irery no manambara+ ny tenako, dia tsy marina ny fanambarako.+ 32 Misy hafa koa anefa manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarany+ ahy. 33 Naniraka olona tany amin’i Jaona ianareo, ary nanambara ny marina izy.+ 34 Tsy miantehitra amin’ny fanambaran’olona anefa aho, fa ny mba hahavoavonjy anareo no ilazako izany rehetra izany.+ 35 Jiro nirehitra sy namirapiratra izany lehilahy izany, ary naniry hiravoravo vetivety tamin’ny fahazavany ianareo.+ 36 Manana porofo lehibe noho ny porofo omen’i Jaona anefa aho, satria ny asa nanendren’ny Raiko ahy mihitsy izao no ataoko.+ Ary izany asa izany no manaporofo fa nirahin’ny Ray aho. 37 Ny Ray izay naniraka ahy mihitsy koa no nanome porofo momba ahy.+ Mbola tsy nisy fotoana nandrenesanareo ny feony, na nahitanareo ny tarehiny.+ 38 Ary tsy mitoetra ao am-ponareo ny teniny, satria tsy inoanareo ilay nirahiny. 39 “Mikaroka ao amin’ny Soratra Masina ianareo,+ noho ny fiheverana fa amin’ny alalan’izy io no hanananareo fiainana mandrakizay, ary izy io mihitsy no manome porofo momba ahy.+ 40 Tsy mety manatona ahy anefa ianareo mba hanananareo fiainana.+ 41 Tsy mandray voninahitra omen’olona+ aho. 42 Fantatro tsara anefa fa tsy misy fitiavana an’Andriamanitra ao anatinareo.+ 43 Tonga tamin’ny anaran’ny Raiko+ mantsy aho, nefa tsy noraisinareo. Raha misy tonga amin’ny anaran’ny tenany anefa, dia horaisinareo. 44 Ahoana moa no hinoanareo, nefa ianareo aza mandray voninahitra+ avy aminareo samy ianareo ihany, ary tsy mitady ny voninahitra avy amin’ilay Andriamanitra tokana?+ 45 Aza mihevitra hoe hiampanga anareo any amin’ny Ray aho. Misy hafa miampanga anareo, dia i Mosesy,+ izay nametrahanareo ny fanantenanareo. 46 Raha nino an’i Mosesy ianareo, dia ho nino ahy, satria nanoratra momba ahy i Mosesy.+ 47 Fa raha tsy mino izay nosoratany ianareo,+ ahoana moa no hinoanareo ny teniko?”
^ Andry maro no manohana ny tafony.
^ A.b.t.: “fasana atao ho fahatsiarovana.”